NeverDie စျေး - အွန်လိုင်း NDC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NeverDie (NDC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NeverDie (NDC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NeverDie ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $22 510.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NeverDie တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NeverDie များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NeverDieNDC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000499NeverDieNDC သို့ ယူရိုEUR€0.000422NeverDieNDC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000381NeverDieNDC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000454NeverDieNDC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00444NeverDieNDC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00314NeverDieNDC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.011NeverDieNDC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00186NeverDieNDC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000662NeverDieNDC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000696NeverDieNDC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.011NeverDieNDC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00387NeverDieNDC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00269NeverDieNDC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0374NeverDieNDC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0843NeverDieNDC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000685NeverDieNDC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000762NeverDieNDC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0155NeverDieNDC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00347NeverDieNDC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0532NeverDieNDC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.593NeverDieNDC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.193NeverDieNDC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0364NeverDieNDC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0137
NeverDieNDC သို့ BitcoinBTC0.00000004 NeverDieNDC သို့ EthereumETH0.000001 NeverDieNDC သို့ LitecoinLTC0.000009 NeverDieNDC သို့ DigitalCashDASH0.000006 NeverDieNDC သို့ MoneroXMR0.000006 NeverDieNDC သို့ NxtNXT0.039 NeverDieNDC သို့ Ethereum ClassicETC0.00007 NeverDieNDC သို့ DogecoinDOGE0.144 NeverDieNDC သို့ ZCashZEC0.000006 NeverDieNDC သို့ BitsharesBTS0.0154 NeverDieNDC သို့ DigiByteDGB0.016 NeverDieNDC သို့ RippleXRP0.00177 NeverDieNDC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00002 NeverDieNDC သို့ PeerCoinPPC0.00166 NeverDieNDC သို့ CraigsCoinCRAIG0.228 NeverDieNDC သို့ BitstakeXBS0.0213 NeverDieNDC သို့ PayCoinXPY0.00872 NeverDieNDC သို့ ProsperCoinPRC0.0627 NeverDieNDC သို့ YbCoinYBC0.0000003 NeverDieNDC သို့ DarkKushDANK0.16 NeverDieNDC သို့ GiveCoinGIVE1.08 NeverDieNDC သို့ KoboCoinKOBO0.114 NeverDieNDC သို့ DarkTokenDT0.00046 NeverDieNDC သို့ CETUS CoinCETI1.44